Semalt: कसरी तपाइँको WordPress साइटलाई Wordfence सुरक्षाको साथ सुरक्षा गर्ने
अहिले सम्म, WordPress सबैभन्दा प्रसिद्ध र व्यापक प्रयोग गरिएको सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीको रूपमा लिइन्छ। तर हामी यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं कि यो सही र सुरक्षित छैन किनकि धेरै दुर्भावनापूर्ण आक्रमणकारीहरूले तपाईंको साइटहरू प्रवेश गर्ने तर तपाईंको प्रणालीहरूलाई ठूलो हदसम्म क्षति पुर्‍याउने तरिकाहरूमा काम गर्छन्। यदि तपाइँले एक वेबसाइट बनाउनु भएको छ वा पहिले नै एक व्यवसाय चलाइरहनुभएको छ भने, तपाइँको वेब पृष्ठहरु लाई बचाउन र यस सम्बन्धमा केहि तरिकाहरू सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ।
वर्डप्रेसको सुरक्षा र प्रसिद्धि काममा आउँदछन्, र त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन तपाईंको साइटहरूलाई माथिकोदेखि तलसम्म सुरक्षित राख्न मद्दतको लागि डिजाइन गरिएको हो। Wordfence सुरक्षा आफ्नो साइट को सुरक्षा सुनिश्चित र यहाँ जुलिया Vashneva देखि एक शीर्ष विशेषज्ञ एक यस्तो प्रणाली छ Semalt , तपाईं बताउन कसरी यो सबै भन्दा राम्रो उपयोग गर्न जा रहेको छ।
वर्डफेंस सुरक्षा प्लगइनको परिचय
वर्डफेंस सुरक्षा प्लगइन केवल दुई व्यक्तिद्वारा स्थापित गरिएको छ र पूर्ण फिचर गरिएको वर्डप्रेस प्लगइन हो। यो WordPress को प्लगइन सेक्सनमा अवस्थित गर्न सकिन्छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको साइटहरू प्रबन्ध गर्न सक्षम गर्दछ। उनीहरूले यो साइटको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दछन् यस प्लगइन प्रयोग गरेर योसँग धेरै सुविधाहरू छन् र अघिल्लो प्रयोगकर्ताहरूबाट जबरजस्त प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। यो एक मुट्ठी विकल्प र विशेषताहरु को साथ आउँछ तपाइँको अपेक्षाहरू माथि आउन।
यो प्लगइनले तपाईंलाई सम्भावित जोखिमहरू, बट्स, भाइरसहरू, र मालवेयरका लागि WordPress साइटहरू स्क्यान गर्न दिन्छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई ईमेल मार्फत सचेत गर्दछ यदि केहि खतराहरू दिनभरि पप अप हुन्छन्। यसले उन्नत लगइन सुविधाहरू र सुरक्षा उपायहरूको साथ समर्थन प्रदान गर्दछ। अन्तिम तर कम्तिमा होइन, यो प्लगइनले सबै आईपी ठेगानाहरूलाई रोक्न सक्छ जुन शंकास्पद देखिन्छ र तपाईंको साइटहरूमा नक्कली ट्राफिक पठाउँदै छ।
वर्डफेंस सुरक्षा प्लगइन सेट अप गर्नुहोस्
यो वर्डफेंस सुरक्षा प्लगइन सेट अप गर्न सीधा छ। यसका लागि तपाईंले केही चीजहरू दिमागमा राख्नु पर्छ:
१. पहिलो कुरा भनेको लगइन सुरक्षा उपायहरू स्थापना गर्नु हो। तपाईं वर्डफेंस प्लगइन क्लिक गरेर र सक्रिय गरेर यो प्रक्रिया सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले आधारभूत विकल्प सेक्सन फेला पार्नु पर्छ र सुरक्षा सक्षम गर्न बक्समा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। एकचोटि तपाईंले यसलाई सक्षम गरिसकेपछि, तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ कि पासवर्ड परिवर्तन गर्न सकिदैन, त्यसैले यसलाई धेरै पटक प्रयास गर्नु आवश्यक पर्दैन। यदि तपाईंले यो गर्नुभयो भने, तपाईंको साइट अस्थायी वा स्थायी रूपमा ब्लक गरिएको छ।
२. दोस्रो कुरा नियमित आधारमा तपाईंको साइटको स्क्यान प्रदर्शन गर्दैछ। प्राय: जसो व्यक्ति तिनीहरूको साइट स्क्यान गर्न बेवास्ता गर्दछन्, र यो त्यहि हो जुन सबैभन्दा धेरै ह्याकरहरू सक्रिय हुन्छन्। वर्डफेंस स्क्यानले तपाईंलाई सम्पूर्ण तपाईंको साइट जाँच गर्न अनुमति दिन्छ, र तपाईंलाई द्वेषपूर्ण चीजहरू र संक्रामक बान्कीबाट छुटकारा मद्दत गर्दछ यदि कुनै छ भने।
The. तेस्रो र अन्तिम चरण भविष्यका लागि सुरक्षा सतर्कताहरू सेट अप गर्दैछ। यसको लागि तपाई वर्डफेंस सुरक्षामा सुरक्षा सतर्कता सेक्सनमा जानु पर्छ। तपाईंले यसलाई सक्षम गर्नुपर्नेछ र तपाईंको ईमेल आईडी घुसाउनुहोस् जहाँ तपाईं सुरक्षा मुद्दाहरूको बारेमा सूचनाहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ।
WordPress सुरक्षा लाई कहिले पनि ग्रहण गर्नु हुँदैन। एक पेशेवर वेबसाइट को मालिक को रूप मा, यदि तपाइँ इन्टरनेट मा आफ्नो साइट को रैंकिंग सुधार गर्न चाहानुहुन्छ भने मालवेयर र बट्स को सबै प्रकार बाट छुटकारा पाउन यो तपाइँको उत्तरदायित्व हो।